သက်ကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပေမယ့် ကိုဗစ်ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရင်ဆိုင်ပြီး ကုသမှုခံယူနေလို့ စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမရှိသေးတဲ့ ဦးမိုးဒီနဲ့ဦးဧရာ…. – Shwewiki.com
သက်ကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပေမယ့် ကိုဗစ်ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရင်ဆိုင်ပြီး ကုသမှုခံယူနေလို့ စိုးရိမ်ရတဲ့အနေအထားမရှိသေးတဲ့ ဦးမိုးဒီနဲ့ဦးဧရာ….
December 4, 2020 By admin Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ (၂၀၂၀)ခုနှစ်တစ်နှစ်လုံးကတော့ ကိုဗစ်ကြောင့် အနုပညာရှင်တွေလည်း အလုပ်တွေရပ်နားထားရတာဖြစ်ပါတယ်။
အနုပညာလောကက အနုပညာရှင်တစ်ချို့လည်း ကိုဗစ်ရောဂါကြောင့် ကြွေလွင့်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုလတ်တလောမှာဆိုရင်လည်း ဦးမိုးဒီနဲ့ဦးဧရာတို့ လူရွှင်တော်ကြီးနှစ်ဦးကတော့ ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရလို့ ဆေးရုံတက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးမိုးဒီနဲ့ဦးဧရာတို့နှစ်ယောက်က အသက်ကြီးပိုင်းတွေဖြစ်ပေမယ့် ကိုဗစ်ကို ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ရင်ဆိုင်နေကြပြီး ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။
ကောင်းစံကလည်း ဖခင်ဖြစ်သူဦးမိုးဒီကို သေချာဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်ပေးနေပြီး အခြေအနေကိုလည်း ပရိသတ်တွေထံ အမြဲအသိပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကလည်း ဦးမိုးဒီနဲ့ဦးဧရာတို့နှစ်ယောက် အမြန်ဆုံးဆေးရုံဆင်းနိုင်ဖို့အတွက် ဆုတောင်းပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်။
အခုဆိုရင်တော့ လူရွှင်တော် အောင်သော်က”ဆရာကိုဧရာရယ် အဖေဦးမိုဒီရယ်နှစ်ယောက်လုံးကျန်းမာရေးကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ စိုးရိမ်ရတဲ့အနေထားမှာမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးမေးနေကြလို့တင်ပေးတာပါနော်”ဆိုပြီး Video Callခေါ်ပြီး သတင်းမေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကို အမြဲအပျော်တွေပဲပေးတဲ့ ဦးမိုးဒီနဲ့ဦးဧရာတို့နှစ်ယောက် အမြန်ဆုံးသက်သာကြပါစေနော်။
ပရိသတ္ႀကီးေရ (၂၀၂၀)ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္လုံးကေတာ့ ကိုဗစ္ေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္ေတြလည္း အလုပ္ေတြရပ္နားထားရတာျဖစ္ပါတယ္။
အႏုပညာေလာကက အႏုပညာရွင္တစ္ခ်ိဳ႕လည္း ကိုဗစ္ေရာဂါေၾကာင့္ ေႂကြလြင့္သြားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။အခုလတ္တေလာမွာဆိုရင္လည္း ဦးမိုးဒီနဲ႔ဦးဧရာတို႔ လူ႐ႊင္ေတာ္ႀကီးႏွစ္ဦးကေတာ့ ကိုဗစ္ကူးစက္ခံလိုက္ရလို႔ ေဆး႐ုံတက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္။
ဦးမိုးဒီနဲ႔ဦးဧရာတို႔ႏွစ္ေယာက္က အသက္ႀကီးပိုင္းေတြျဖစ္ေပမယ့္ ကိုဗစ္ကို ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ခိုင္ရင္ဆိုင္ေနၾကၿပီး က်န္းမာေရးအေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္လာတာကိုေတြ႕ရပါတယ္ေနာ္။
ေကာင္းစံကလည္း ဖခင္ျဖစ္သူဦးမိုးဒီကို ေသခ်ာဂ႐ုစိုက္ေစာင့္ေရွာက္ေပးေနၿပီး အေျခအေနကိုလည္း ပရိသတ္ေတြထံ အၿမဲအသိေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြကလည္း ဦးမိုးဒီနဲ႔ဦးဧရာတို႔ႏွစ္ေယာက္ အျမန္ဆုံးေဆး႐ုံဆင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။
အခုဆိုရင္ေတာ့ လူ႐ႊင္ေတာ္ ေအာင္ေသာ္က”ဆရာကိုဧရာရယ္ အေဖဦးမိုဒီရယ္ႏွစ္ေယာက္လုံးက်န္းမာေရးေကာင္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ စိုးရိမ္ရတဲ့အေနထားမွာမရွိေသးပါဘူးခင္ဗ်ာအားလုံးေမးေနၾကလို႔တင္ေပးတာပါေနာ္”ဆိုၿပီး Video Callေခၚၿပီး သတင္းေမးထားတာျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြကို အၿမဲအေပ်ာ္ေတြပဲေပးတဲ့ ဦးမိုးဒီနဲ႔ဦးဧရာတို႔ႏွစ္ေယာက္ အျမန္ဆုံးသက္သာၾကပါေစေနာ္။
ဖခင် ကွယ်လွန်ခြင်း (၂) နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ အာဟာရ ဒါန အလှူလေး ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ လင်းဇာနည်ဇော်တို့ ညီအစ်မ
ချစ်သူကို လက်ထပ်ခွင့်တောင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ အဆိုတော် ရဲနောင်…